Nyowani vhezheni yeRipo inowanikwa | Linux Vakapindwa muropa
Nyowani vhezheni yeKare iripo
Kodi 16.1 hapana chimwe chinopfuura kungogadziridza kwekugadzirisa, iine shanduko diki dzine chekuita nekugadzirisa zvipembenene kupfuura chero chinhu chipi zvacho.
Iyo Kodi chirongwa chinofara kuzivisa kuwanikwa kweiyo nyowani vhezheni ye Kodi, ndokuti, mhando 16.1, iyo yatovepo kuti tikwanise kurodha pasi nekuiisa pakombuta yedu.
Iyi yekuvandudza ndeye yekutanga kugadzirisa kugadzirisa kweKare 16, iyo isina kubuda kare kare. Icho chikonzero cheichi chigadziriso hachisi chimwe kunze kwekugadzirisa zvikanganiso zvinoonekwa, kugadzirisa zvinhu zvidiki uye kuyedza kugadzirisa ruzivo rwekushandisa chirongwa
Sezvo iri yekugadzirisa yekuvandudza, uye haugone kutarisira nhau zhinji, sezvo zvisingawanzoitika mune iyi mhando dzeshanduro. Mune ino kesi, makuru emitambo ndeye 20% mashandiro ekuvandudza kweiyo EPG chirongwa gwara (ikozvino rinovhura nekukurumidza) uye kururamisa kwetsikidzi dzakanangana neDirectX.
Nyaya diki dzakagadziriswawo, sekukanganisa kwaive mune iyo Android vhezheni, kururamisa kwemamwe mabugs anga ari mune ese mavhezheni echirongwa ichi uye kudzoreredza raibhurari iyo yakange yanyangarika mushanduro 16 uye izvo zvaidikanwa kuti mashandiro akanaka aKare.
Kodi ndiye anotsiva XBMC (Xbox Media Center) uye chirongwa icho icho inobvumidza iwe kushandura chero chishandiso kuita yechokwadi multimedia nzvimbo kuve nekukwanisa kushandura Linux yedu kuita nzvimbo yekutandarira kuti tione edu emafirimu, mavhidhiyo uye nzira dzekushambadzira zviri nyore.
Kodi yemahara software uye inowanikwa kwete chete paLinux, asi pane hombe nhamba yemapuratifomu akadai seWindows, Android, iOS, Mac OS X uye kunyangwe paRaspberry Pi. Naizvozvo, chero kwaunobva, iwe unozogona kunakidzwa nazvo.
Kugadziridza chirongwa ichi Inofanira kunge iri mumatura ekugovana aunofarira uye yaifanirwa kunge yakagadziridzwa otomatiki pane masystem senge Android. Kana iwe uri mutsva, dhawunirodha Kodi kubva kune yayo yepamutemo peji uye tanga kunakidzwa nesimba rayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Nyowani vhezheni yeKare iripo
Ubuntu 16.04 LTS vs Windows 10: nhanho-nhanho kuongorora uye kumisikidza